Ny krizy Corona covid-19 dia mampahatsiahy ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003 izay nihaza an'i Bill Gates: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 May 2020	• 13 Comments
Mihabetsaka ny feo mipoitra fa ny coronavirus dia tena noforonina tao amin'ny laboratoara. Izay nisy nanafika ahy tany am-piandohana tamin'ny alàlan'ny fanamarinam-bokatra momba ny Nu.nl, rehefa nanamarika aho fa mety avy amin'ny laboratoara ireo otrik'aretina toy izany, ankehitriny dia ny haino aman-jery mahazatra ankehitriny ihany no miresaka an'io mety hitranga io. Skynews Lohateny 24 Mey: "Coronavirus dia mety ho andrana« cell culture culture »izay nandeha ratsy».
Nahavita fianarana siantifika i Profesora Nikolai Petrovsky avy ao amin'ny Oniversite Flinders, izay eo ambany fijerin'ny mpinamana, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny La Trobe University any Victoria, ary mampiseho fa ny COVID-19 dia novaina miavaka amin'ny fifindran'ny olombelona, ​​mihoatra noho ny rehetra biby hafa, anisan'izany ny ramanavy. ”
Efa mandeha Janoary 28 2020Na dia talohan'ny nahatsapan'ny olona hoe inona i Bill Gates dia nolazaiko tao amin'ilay tranonkala fa nanao ity fanambarana manaraka ity tamin'ny taona 2017 ity izy:Ny areti-mifindra manaraka dia mety hitranga eo amin'ny efijery eo amin'ny solosaina misy mpampihorohoro izay te-hampiasa fanodikodinana genetika hamolavola sanganasa sela bitika."
Raha mpamatsy rafitry ny solosaina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy birao eran'izao tontolo izao ianao dia afaka mampitombo ny fihodinananao, raha fantatrao ny fomba fiasan'ireo solosaina ireo. Fantatrao fa malemy ny solosaina sy amin'ny Internet dia afaka miditra amin'ny rafitra toa izany ianao. Noho izany dia afaka amidinao tsimok'aretina solosaina ary mahazo vola fanampiny amin'ny fanomezana vahaolana. Mazava ho azy fa tsy manao izany ny tenanao, satria mety ho be loatra izany. Ianao dia manao izany amin'ny alàlan'ireo orinasa mijery mahaleo tena tanteraka.
Ny fanafihan'ny tsimokaretina solosaina indrindra tamin'ity taona ity dia nanakorontanana ireo orinasa, masoivohon'ny governemanta ary mpampiasa an-trano manerana an'izao tontolo izao, sady naneso ny mpanam-pirenen'i billionaire, Bill Gates sy ny rindrambaiko Windows azy.
Solosaina an-jatony maro no efa nianjera tany Amerika Avaratra, Azia ary Eropa, ary nihanitatra ny hafainganam-pandeha rehefa nameno ilay viriosy tamin'ny Internet, hoy ny manam-pahaizana iray.
Ary nampitandrina izy fa misy otrikaretina "virus", izay hipoaka ny asabotsy.
Manararaotra harona rindrambaiko amin'ny ankamaroan'ny rafitra Windows avy amin'i Microsoft i Bl Blaster, miaraka amin'ny Windows 2000, Windows XP, Windows NT ary Windows Server 2003 no marefo indrindra. (Loharanom-baovao: smh.com.au)
Izany dia tamin'ny 2003 ary mora ny maminavina hoe iza no nanisy betsaka tamin'ity fihanahana virus ity. John Wendell Thompson dia tamin'io fotoana io filohan'ny Symantec fanoherana ny otrikaretina, orinasa izay namoaka ny 'fanavaozana ny famoahana haingana haingana' hamelezana ity tsimok'aretina MS Blaster ity tamin'ny 11 Aogositra 2003. Iza no filohan'ny Microsoft ankehitriny? Ankavanana, mitovy ny John Wendell Thompson.
Mazava ho azy fa tsy voatery ho olona manan-tsaina ianao hamantatra hoe iza no ao ambadik'ity 'Olana, Ady amin'ny hevitrareraka ny lalao. Hita daholo rehefa manokatra ny masonao ianao. Io fihanaky ny solosaina MS Blaster io dia mazava ho azy io. Nividy mombamomba ny virus anti-virus sy ny masobe ny vahoaka.
Amin'ny fahalalana fa ny vatan'olombelona sy ny génu dia voapetaka tanteraka sy ampiasaintsika Haitao CRISPR-CAS Ny fandikana ny sombin'ny ADN amin'ny Internet dia ny vatan'olombelona, ​​izay solosaina trano sy birao tamin'ny 2003. Ny coronavirus dia otrikaretina MS Blaster tamin'izany fotoana izany ary i Bill Gates no mbola fitaomana lehibe indrindra. Ny volany dia mandalo ao amin'ny Bill & Melinda Gates Foundation amin'ireo orinasan'ny anti-virus izay mamokatra vaksiny. Ny lalao mitovy, amin'ny ambaratonga bio-solosaina ihany.
Izay mitondra antsika ao amin'ny fanontaniana hoe: "Mora amin'ny ahoana no handresy lahatra ny vahoaka amin'ny fahavalo tsy hita maso ary misy fepetra takiny ve?" Naharatsy ny solosaina ny fihanaky ny tsimok'aretina MS Blaster tamin'ny 2003. Ny fihanaky ny Covid-19 dia manimba ho an'ny biocomputer maha-olombelona. Tsy fotoana tokony hampahiratanao ny masonao ve? Ny fomba tokana amin'ity tsikera manerantany ity dia ny handroana ireo mpisoloky ary haka ny karipetra vola lehibe amin'ny politika sy ny media. Manomboka amin'ny mifoha izany ary mitohy ao anatin'ny iray revolisiona ny fo, dia raiso hetsika. Raiso hetsika ary atombohy ny revolisiona:
Lisitry ny rohy loharano: skynews.com, smh.com.au, wikipedia.org
Netflix 'Pandihan-tena: ahoana ny hisorohana ny fampielezana doka amin'ny valan'aretina momba ny vaksiny maneran-tany SuperHuman-2.0?
Tags: fanafihana, Antivirus, Bill, blaster, solosaina, Coronavirus, Covid-19, Featured, Gates, John, Micorsoft, MS, MSBlaster, pc, Symantec, Thompson, vaksiny, vaksiny, Wendell
28 May 2020 amin'ny 11: 33
ny Washington Times koa dia nitatitra momba io fanadihadiana io, fa io trano fanararaotra mihomehy io dia manomboka mirodana isan'andro. Ny fahasimbana natao fotsiny dia tsy azo resahina ..
28 May 2020 amin'ny 11: 40
An'i Untouchables ny vavahady ary arovan'ny mpiambina matetika.
Lasa mpiasan'ny voninahitra i Bill Gates
Manazava ny fiaraha-miasa feno an'i Angletera amin'ny alàlan'ny Pirbright Institute ihany koa izany.
30 May 2020 amin'ny 00: 53
Angamba tsy rariny raha tsy azo resahina ny fahavoazana natao. Raha azo amboarina, dia hiverina amin'izay efa azontsika ihany isika. Raha tsy mety izany, dia mila manorina zavatra vaovao isika… ..
Hafahafa ihany, ity "krizy" lehibe ity angamba no lehibe indrindra amin'ny fanaovan-javatra tsy mitovy nefa tsy voatery ho voafongotra tanteraka.
Saingy mbola ho zavatra iray ihany izany….
28 May 2020 amin'ny 13: 39
Ankehitriny dia sahirana izy ireo ...
Vondron'olona miantehitra amin'ny Soros dia milaza ny krizy Covid-19 fa fotoana tsara tokoa ny 'handrava ny fianakaviana'
28 May 2020 amin'ny 15: 36
Miankina amin'ny script
Ny orinasa vaksiny lehibe WHISTLEBLOWER dia milaza fa ny vaksiny RNA #COVID vaovao izay novolavolainy dia mety hiteraka STERILITY hatramin'ny 97% amin'ny vehivavy ary koa hanova ny ADN ny 100% ny olona mandray izany.
28 May 2020 amin'ny 15: 39
28 May 2020 amin'ny 16: 59
Billionaires Manandrana Hamafana ny Vahoaka Eran-tany, hoy ny tatitra
Nataon'i Robert Frank
26 Mey 2009 11:57 am ET
Oxel nanoratra hoe:
29 May 2020 amin'ny 09: 00
@Analyze: azo hitranga any an-kafa ve ilay horonan-tsary?
29 May 2020 amin'ny 16: 37
miverena aminy Zed Phoenix tahaka an'i Buttar, Mikovits, Kaufman dia ahiana mahazatra ary tohanan'ny tambajotra Icke, Jones, Allen.
28 May 2020 amin'ny 15: 49
Taloha, dia ny Celts, ny Anglo-Saxons, no nifehy ny Angletera tany am-boalohany. Manana 'elite »hafa ianao izao
iza no nitondra an'io anarana io tamin'ny anarana anglisy vita sy anglisy. Hitanao manerana an'izao tontolo izao, ilay 'elite' mpifindra monina.
30 May 2020 amin'ny 06: 40
Marina, ny "normal normal" an'ny demokrasia solontenany dia nametraka antsika amin'ity toe-javatra ity, koa fotoana tokony hisian'ny fotoana vaovao. Ny ara-dalàna vaovao, noho izany, tsy voahodidin'ny zizao ankehitriny, fa rafi-pitondrana araka ny fotokevitra demokrasia mivantana. Noho izany ny fotoana http://www.fvvd.nl ary mitsidika ary manao sonia ny fitakiana
30 May 2020 amin'ny 12: 22
Eny 'isika' tokony hisaotra 'ireo dokotera' noho ny asa 'tsara'.
Nanao sonia ny fanangonan-tsonia ny olona, ​​IZAO.
30 May 2020 amin'ny 18: 41
Ary indreto ny vaovao fa voageja ny fihetsiketsehana mahazatra. Andriamatoa George Floyd amin'ny fihetsiketsehana mijoro amin'ny masonic. Toa nahafantatra ny polisy izy, satria niara-niantoka ny filaminana izy ireo. Sainam-pirenena sandoka toa tsy fahita firy, sarimihetsika vitsivitsy izay mampiseho izany amin'ny fomba tsy miangatra. Anisan'ny lalana hafa faha-33 ny loko sns.
« Ny herin'ny fanovana dia manomboka amin'ny fametrahana ny tahotra, ny fandaharana ary ny tsy fahitana diso ary mivadika ho tena revolisiona
Fomba famonoana ataon'ny polisy Minneapolis George Floyd hamahana ny ady an-trano? »
Total fitsidihana: 4.235.493